Imibhalo kaChris Rothstein mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge UChris Rothstein
UChris Rothstein uyi-CEO futhi ungumsunguli we- I-Groove.co, ipulatifomu yokubandakanya abathengisi. Ngaphambi kweGroove.co, uChris wakha, wakala futhi waphatha amaqembu okuthengisa amabhizinisi kwaGoogle. Manje usiza ukuletha ubuchwepheshe besimanje emhlabeni wezentengiso ukuze wonke umuntu kusuka kuma-ops wokuthengisa aye kubaqondisi bezentengiso angachitha isikhathi esiningi enikeza inani kumakhasimende abo nasezinkampanini zabo.
Isu Lokuthengisa Elisuselwa ku-Akhawunti Ikusasa, kanti iGroove ilapha ngalo
NgoLwesithathu, Februwari 7, 2018 NgoLwesithathu, Februwari 7, 2018 UChris Rothstein
Uma kukhulunywa ngokuthengiswa kwesoftware ye-SaaS, ukukhomba abantu akuyona neze imodeli yokusebenza kahle. Ngemuva kwakho konke, isilinganiso sabantu abangu-5.4 bayabandakanyeka esinqumweni esisodwa sokuthengisa ngamabhizinisi. Njengoba kunikezwe ukuthi ukuvota okusekelwe eqenjini kuyinto ejwayelekile, ukuthengisa okususelwa ku-akhawunti (ABS) kukhiqiza kakhulu kunokukhomba imikhondo ethile. Indlela esekwe ku-akhawunti yokuthengisa, noma kunjalo, ingadla isikhathi. Ukulandela ngomkhondo ukujula kwamamethrikhi nezikhathi ezibekiwe kokuqondiwe okuningi, nokusebenzisana kulolo lwazi kuwo wonke amaqembu angaphakathi,